Heshiis nabadeed oo la dhex dhigay beelo ku dagaalamay gobolka Hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Heshiis nabadeed oo la dhex dhigay beelo ku dagaalamay gobolka Hiiraan
A warsame 28 December 2014
Mareeg.com: Waxgarad ka kala socday beelo horay ugu dagaalamay deegaanada Deefoow, Jeereey iyo Kabxanleey ee gobalkan Hiiraan ayaa shalay kulan dib u heshiisiin ah loogu qabtay magaalada Baledweyne.
Gogosha kulanka waxaa si wadajir ah u soo qabab qaabiyay ugasyada labada dhinac Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif Ugaas Rooblle iyo Ugaas Gaarane Ugaas Aadan Ugaas Cusmaan iyadoo maamulka gobalka Hiiraan uu lahaa fududeeynta gogosha.
Kulanka oo ay sidoo kale goob joog ka ahaayeen odayaasha Labada dhinac waxaa si wada jir ah u muujiyeen in heshiis buuxa laga gaaray xiisadii u dhaxeeysay walaalaha wada daga Gobalka.
Waxaa goobta ka hadlay ugaasyadii soo qaban qaabiyay Kulanka ugaas C/raxmaan iyo ugaas Gaarane, sidoo kale waxaa halkaasi laga aqriyay Qodobadda labada dhinac ay ku heshiiyeen.
Gudoomiyaha gobalkan Hiiraan, C/fataax Xasan Afrax oo ugu dambeeytii soo gaba gabeeyay Kulankan dib u heshiisiineed ayaa uga mahad celiayay ugaasyada labada dhinac kaalinta ay ku lahaayeen heshiiska ay gaareen labada dhinac.
Labada beelood ee kulanka dib u heshiisiinta ah loo qabtay ayaa dhowr jeer ku dagaalamaya deegaanada kor ku xusan, waxaana labada dhinac iska dileen dad farabadan, halka lag gubay tuulooyin.
Muungaab: Wasiirada cusub halaga dhigo geesiyaal aan madaxweynaha ku ciriirineyn madaxtooyada